Olee otú Ọkụ HD Video ka DVD on Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata na Ọkụ HD Video ka DVD (Windows 10 gụnyere)
HD video-aghọ ndị ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu ndị a afọ kemgbe o nwere mma video àgwà na visual mmetụta. Ọtụtụ videos e site camcorders na ibudatara na Ịntanetị na-HD usoro. Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ HD videos na chọrọ ọkụ HD vidiyo na DVD na-echekwa na nkwado ndabere na HD vidiyo ma ọ bụ na-achọ ime a video ekele kaadị ma ọ bụ DVD onyinye si HD videos na ị na iwere, mgbe ahụ ị na-abịa-nri ebe . Isiokwu a na-eweta ihe dị mfe ma na ngwa ngwa ngwọta otú ọkụ HD video ka DVD (Windows 10 gụnyere).
Wondershare DVD Creator Bụ ihe HD video ka DVD burner nke ọ bụghị nanị enye gị ohere ele HD vidiyo na nkịtị n'ụlọ DVD ọkpụkpọ, kamakwa-enyere gị aka ndabere na-azọpụta gị HD videos. Na ya, ị nwere ike tọghata HD videos dị iche iche video formats, dị ka AVI, MP4, MKV, TRP, MTS, M2TS, AVCHD, wdg DVD na dị nnọọ ole na ole clicks. Ọzọkwa, a HD video ka DVD Ntụgharị-enye gị ohere dezie videos ma na-etinye ahaziri DVD menus.
Free download HD video ka DVD burner:
Cheta na: Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, ị pụrụ iji DVD Creator for Mac. Get nri DVD Creator version na-eso nzọụkwụ iji tọghata HD ka DVD. (Cheta: The nzọụkwụ ewe Windows screenshots ihe atụ. Iji ọkụ HD na Mac, ọ fọrọ nke nta otu ihe ahụ.)
Olee otú iji tọghata na ọkụ HD video ka DVD nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ozugbo ị ebudatara DVD Creator, soro set-elu ọkachamara iji wụnye ya. Ka ọ dịgodị, fanye a recordable DVD -R (DVD + R, DVD + RW, DVD-RW, wdg) n'ime DVD burner mbanye ma na-njikere ime HD video ka DVD.
Nzọụkwụ 1. Import HD videos ka usoro ihe omume
Pịa "Import" na-agagharị na họrọ HD videos ị ga-amasị apa ọkụ. Preview nke kwukwara videos dị na nri ị na-elele window.
Nzọụkwụ 2. Dezie HD videos na wuru na-video nchịkọta akụkọ
Họrọ a video clip na pịa edit button imeghe video edit window. Ka ị pụrụ ịhụ, ị ​​na-ekwe ka hazie gị vidiyo site cropping, n'usoro n'usoro, trimming, na-agbakwunye mmetụta, na-agbakwunye watermarks na na.
Nzọụkwụ 3. Họrọ a DVD menu
N'okpuru "NchNhr" taabụ, ị nwere ike na-ede akwụkwọ a DVD menu n'ihi na gị HD video DVD. Ị nwere ike họrọ onye si wuru na-free DVD menu template na hazie DVD menu thumbnails, ndabere oyiyi, buttons, wdg
Nzọụkwụ 4. Preview na ọkụ HD vidiyo na DVD
Ịhụchalụ ọrụ gị n'ihu na-ere ọkụ ya. Mgbe niile bụ OK, na-aga "Ọkụ", họrọ mmepụta Ọkpụkpọ na parameters na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike dị nnọọ pịa "Ọkụ" button na-amalite HD video ka DVD converting.
Ihe Ọmụma nkekọrịta: Brief iwebata HD videos (TS, MTS, M2TS, TP)
Mụtara otú ọkụ HD vidiyo na DVD diski, ka na-a ngwa ngwa anya na ndị kasị ewu ewu HD video formats:
TS: Ọ bụ ụdị nke dijitalụ akpa format na encapsulates packetized elementrị iyi na ndị ọzọ na data. TS na-akọwapụtaghị ya MPEG-2 Part 1, Systems (ISO / IEC ọkọlọtọ 13818-1). Transport iyi awade atụmatụ maka njehie mgbazi maka njem n'elu unreliable mgbasa ozi, na-eji na agbasa ozi n'ikuku ngwa dị ka DVB na ATSC. Ịmụta otú ọkụ TS ka DVD.
TP: TP faịlụ na-kere Beyond TV dijitalụ video ndekọ software eji idekọ video. Faịlụ a bụ dere iji a dakọtara TV tuner kaadị na a telivishọn isi iyi dị ka analọg ma ọ bụ dijitalụ USB, satellite, ma ọ bụ na poolu. TP faịlụ kpọọ data si a iga iyi (TS), nke bụ a nkwukọrịta protocol maka audio, video, na data. Ịmụta otú ọkụ TP ka DVD.
MTS / M2TS: The MTS / M2TS faịlụ ụdị na-isi metụtara AVCHD. AVCHD bụ elu-definition dijitalụ video format na-akwado 1080i na 720p na a ezi uche dị obere faịlụ size. AVCHD faịlụ dabeere na MPEG4 Codec. Ekwu okwu banyere AVCHD, MTS na M2TS ndị yiri. Ọ bụ .MTS on camcorder na .M2TS dị ka PC. Ịmụta otú ọkụ MTS / M2TS ka DVD.
Ebe ọ bụ na n'elu kwuru banyere video faịlụ formats na-anaghị akwado site na ọtụtụ media egwuregwu. Na-egwu ha ma ọ bụ ndị ọzọ HD video faịlụ dị ka HD MOV na HD MKV on PC, a VLC ọkpụkpọ na-atụ aro iji. E wezụga, i nwere ike ibudata ma wụnye ọzọ codec ngwugwu dị ka DirectShow FilterPack 3.2 nke na-enyere ị na-egwu HD iga iyi videos mfe.
8 Best Animated Movie eso
Olee otú Bee / Split / Kpaa MOV (QuickTime) Files
MOV Player: Olee otú Play MOV Files (QuickTime)